कांग्रेस आफैले घोषणा गरेको संविधानको उचित जस लिन सकेन । संविधान कार्यन्वयनको पहिलो पाईलामा नेपाली कांग्रेसले जनताकोबीचमा प्रिय बन्ने कोसिस त गर्यो तर सफल भएन । सम्पन्न तीन वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय भोग्नु पर्यो ।
पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठक र त्यसपछि महासमितिको वैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरिरहेका छन् । तर सभापति सुनेर पनि सुनेझै गरिरहेका छन् । पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेता स्वीकार गर्ने स्थितिमा छैनन् । चुनावी हारको समिक्षाको लागि चर्को आवाज उठेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस यूवा नेता गगन थापासँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानिको सम्पादित अंश :
आजको दिनमा कांग्रेस कता छ ? प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ ?
नेपाली कांग्रेस ४ वर्षसम्म संसदमा रह्यो । जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले पूरा गर्यो । चुनाव हार्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । आजको दिनमा कांग्रेसलाई पाँचवर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट छ । कांग्रेस ७ वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ । केन्द्रमा पनि त्यहि प्रतिपक्षमा बस्छ । कांग्रेस पार्टीले सुदृढिकरण हुनुपर्छ ।
कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले संसदीय दलको नेता बन्ने र प्रतिपक्ष दलको नेता बन्ने तयारी थाल्नु भएको छ भनिदैछ, के हो खास कुरा ? संसदीय दलको नेता सहमति चुन्ने या प्रतिष्पर्धाबाट ?
पार्टी केन्द्रीय सदस्य समितिको वैठक मै पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेतागणहरुलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ । अहिले आग्रह गर्ने हो । आग्रहलाई नमानेको खण्डमा प्रतिष्पर्धा गर्ने हो । जतिसक्दो चाँडो पार्टीको विषेश महाधिवेशन बोलाएर उहाँहरुले छोड्नुपर्छ । अरु जो आउछ प्रतिष्पर्धाबाट आउछन । यो प्रतिष्पर्धाको प्रारम्भ संसदीय दलको नेताबाट गर्नुपर्छ । आजको दिनमा अर्थात यो बेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले विश्राम लिनुपर्छ । अरुलाई मौका दिनुपर्छ भनेका छौँ । अब हामीले अपेक्षा गरौँ उहाँले मान्नुहुन्छ भनेर ।
देउवाले त मेरो पक्षमा बहुमत छ, किन संसदीय दलको नेता नहुने भन्नु भएको छ नि ?
त्यो तपाईलाई भन्नु भयो होला ।
होईन गगन जि बाहिर समाचार आईसके नि ?
होईन । त्यो बाहिर आयो आएन भन्दा पनि मैले अघि भने हाम्रो आग्रह मान्नुहुन्छ । नमानेको खण्डमा हामी प्रतिष्पर्धा गर्छौँ ।
उसो भए तपाई संसदीय दलको नेतामा तयार हुनुहुन्छ ?
छैन् । त्यो मेरो कुरा होईन । हामी सल्लाह गर्छौँ । पार्टीको सभापतिले बस्दिएर अरु कोही नेतालाई पार्टीको जिम्मेवारी दिदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । हामीले काम गर्ने हो । अहिले सल्लाह नगरौ ।
पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले संसदीय दलको नेतामा आफ्नो उम्मेदारी दिनुभयो भने तपाईहरु अर्को उम्मेदार अघि सार्नुहुन्छ ?
निश्चित रुपमा हामीले अर्को उम्मेदारी अघि सार्छौँ । अहिले पनि मैले भनिरहेको छु उहाँले मान्नुहुन्छ । सबै नेता कार्यकर्तालाई मिलाए लैजाने अनि संसदमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्ने नेता हुनुपर्छ ।
उहाँसँग बहुमत हुँदा हुँदै कसरी अरुलाई छोड्नु हुन्छ ?
मैले तपाईलाई इस्पष्ट रुपमा जानकारी गराए । हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ ।
तपाईहरुका आग्रह उहाँले के नै मान्नु भएको छ र ? तपाईहरु सात भाईले विषेश महाधिवेशन बोलान आग्रह गर्नुभयो ? केन्द्रीय समितिको वैठक बोलाउनको लागि आग्रह गर्नु भयो खै त उहाँले मान्नु भएको ?
हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ । उहाँले मान्नु भएन भने प्रतिष्पर्धा हुन्छ । त्यो भन्दा अरु के भन्दा स्पष्ट हुन्छ ?
यूवा पुस्ताले सभापतिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने सामथ्र्य राख्छ ?
पार्टीभित्र प्रष्पिर्धा हुन्छ । प्रतिष्पर्धा हुँदैमा महाभारत हुनेकुरा पनि होईन । उहाँ पनि प्रतिष्पर्धाबाटै आउनु भएको हो । वैठक बसेर मात्रै समाधान हुँदैन ।
तपाईहरु नै विभक्त र हराउनु भयो नि ?
हामी कही पनि हराएका छैनौँ । राजधानी भन्दा बाहिरका जिल्लाहरुमा जाने । साथीहरुसंग छलफल गर्ने लगायतका कामहरु गरिरहेका छौँ । हाम्रो कुरा लिएर गईरहेका छौँ । पार्टीमा आफ्ना कुराहरु राखेका छौँ ।
‘एज ले होईन एजेण्डा’ले पार्टी चलाउने हो भनेर कांग्रेसका यूवा नेताहरुले भन्नु भएको छ नि ?
ठिक भन्नु भयो । म पनि त्यहि भन्छु । यो यूवा यूवा तपाईहरुले नै भन्नु भएको हो । हामी कोही यूवा होईनौँ । पार्टीका सदस्य हौँ ।
तपाई कांग्रेसको यूवा नेता होईन ?
होईन । म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ । फुर्सदमा रहेको बेला तपाईहरुले भन्नु हुन्छ यूवा नेता भनेर । दोस्रो कुरा हामी यूवा हौँ हामीले मौका पाउनु पर्छ भनेर कहिले भनेका छैनौँ । त्यो पनि तपाईहरु पत्रकारहरुले नै भन्नु भएको हो ।
हामीहरु नेतृत्व लिन तयार छौँ भनेर भन्नु भएको त हो नि ?
गगन थापाले नेतृत्व लिन तयार छु भनेर भनेका छन् भनेर लेख्नुस बोल्नुस् न त । किन यूवाहरुले नेतृत्व लिन तयार छन भन्नु हुन्छ ? गगन थापा तयार भयो भन्नुस् । कांग्रेसका यूवा नेताहरु नेतृत्व लिन तयार भए भनेर भन्नुहुन्छ ?
त्यसो भए तपाई तयार हुनुहुन्छ ?
हो त्यसो भन्नुस् । म कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा चुनाव लडेर आएको व्यक्ति हुँ । मैले भनेको कुरा हो र ? मैले गरेर आएको कुरा हो ।
तपाईले मिडियालाई दोष लगायर उम्किन पाउनु हुन्न, पार्टीभित्र बुढा पुस्ता र यूवा पुस्ता त भन्नै पर्यो नि होईन र ?
तपाईहरुले जर्बजस्त लाद्नु भएका कुराहरुले हामीलाई होईन बुढापुस्तालाई पाईदा गर्छ । यो कुरा यहि राकौँ । हामीले मौका देउ । हामी यूवा हौँ भनेका छैनौ । कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न २ वर्ष लाग्छ । छिटो भयो भने एकवर्षमा होला । अब आउने कांग्रेसको महाधिवेशनमा म लगायत साथीहरुले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नरहेर बस्न तयार छौँ । साधारण सदस्य भएर बस्छौँ । हाम्रो प्रयत्न आगामी पाँचवर्ष पछि हुने चुनावमा पार्टीको स्थिति यो भन्दा तल जान्छ । नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठेको छ । पार्टी संसदीय दलको नेता को बन्छ ? के हुन्छ ? यि सब तपशिलका कुरा हुन ।
पार्टी भत्किन्छ भन्नेमा पिर चिन्ता हो ?
त्यसो पनि होईन । दुईपार्टी एक भएर चुनाव लड्दा चुनाव हारिनुलाई पिरको रुपमा लिनु हुँदैन । जनताले काँंग्रेसको लागि आजको दिनमा धेरै सदासयता देखाएका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट हालेका मानिसले कांग्रेसलाई नै भोट हाले । तर के मधेश, के पहाड यूवा पुस्ताले कांग्रेस राजेन त्यो डरको विषय हो । राजधानीको मात्रै परिणामलाई हेरे हुन्छ । को नेता बन्ने ? को के बन्ने ? मात्रै के हो भने कांग्रेसको क्षेतिलाई पुर्न सक्नुपर्छ । सकेनौ भने पार्टी कम्जोर बन्छ । पार्टी नै कम्जोर बन्यो भने हामी को के बनेको के नै अर्थ रहन्छ र ?
तपाईहरुले भन्नु भयो पुर्नेकाम गर्नु भएन ?
मैले एक्लैले पुर्ने होईन । पार्टीका हरेक कदमहरु जनपक्षिय हुनुपर्छ । अडानहरु जनपक्षिय हुनुपर्छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षको कस्तो भूमिका खेल्छ ? एउटा पक्षले कांग्रेसको पूँजि जम्मा गर्ने अर्को पक्षले सक्ने भयो भने कसरी भलो हुन्छ ? प्रत्यक घटनाले कांग्रेसको पूँजि जम्मा हुनुपर्छ ।
नेतृत्व कम्जोर भईसकेपछि कसरी तपाईले भनेको पूँजि निमार्ण हुन्छ ?
नेतृत्व कम्जोर भन्दा पनि सान्दर्भिकता सकिएको हो । अहिलेका लागि । हामीले गुमाएका मतदाताहरुलाई उहाँहरुका कुनैपनि निर्णले फर्किदैनन् । हामीले उहाँहरुलाई भन्दै आएको कुरा यहि हो ।
अब अन्त्यमा, केन्द्रीय महासमितिको वैठक कहिले बस्छ ?
यहि फागुनको दोस्रो हस्ता बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले जिल्ला र गाउँको रिपोर्ट ल्याउने र त्यसको पनि समिक्षा गर्ने हो । त्यो केन्द्रीय सदस्यको वैठकले महासमितिको वैठकको निर्णय गर्छ । हामीले सोचेको भनेको बैशाख मध्यतिर महासमितिको वैकठ बस्नुपर्छ ।
सभापतिले चाहनु हुन्छ त ?
उहाँको निजि हो र पार्टी ? केन्द्रय समितिको वैठकको निर्णय हुन्छ । उहाँले मान्ने नमान्ने कुरा फरक कुरा हो ।
उहाँले चाहनु भएन भने ?
उहाँले नचाहेको कुराहरु भएर गएका छन् । आगामी दिनमा झनै भएर जानेछन् ।